UBUGCISA OBubanzi beemveliso zefarmi, njengoko kucetyiswayo ngabalimi bendawo, ngoku ziyafumaneka kuphela kwii-AGR FARM STOCKS
Ifama yeAGR Garlic, eyenziwe yaziwa ngezindululo ezivela kubathengi basekhaya, ibikhula igalikhi emhlabeni iminyaka. Ishishini lokuvuna lidala imveliso eninzi egalelwe igalikhi entsha kumgubo wegalikhi.
Ingcali ye-AGR Garlic, uManejala uWendy Chen, uyavuya kuba iGallic Farm ivumile ukugcina imveliso yazo. UWendy uthe, "Iimveliso ze-AGR zeGallic Farm zikhethekile kumantla e-China. Akukho mntu wumbi unikezela ngeemveliso ezahlukeneyo. Ngaphambi kokuba sikwazi ukubhengeza ukufika kwesitokhwe kwimarike yeli, sele sithengisile ngayo yonke into esinayo esitokisini. Impendulo kwiimveliso ebenazo kubathengi bethu abaqhelekileyo ibimangalisa. Ngokuqinisekileyo ndingacebisa igalikhi entsha. ”
Iimveliso zeefama ze-AGR zeFama ezigciniweyo zibandakanya iibhalbhu ezintsha zegalikhi, iintlobo ngeentlobo zokunxitywa kwegalikhi, umgubo wegalikhi, igranlic granules kunye neoyile yegalikhi.
UCrisp Xu, uMlawuli kunye nomsunguli we-AGR Garlic Farm, uthe, “Xa abanye abalimi bendawo beza kuthi bezokujonga ukuba bangazithumela na iimveliso zabo kwamanye amazwe sonwabile ukuba sikwazi ukunceda.
“Asinazo igalikhi ezininzi zeemveliso zethu esitokhweni kwaye siyavuya ukuva ukuba abathengi baphesheya kwezilwandle bonwabele uluhlu olukhoyo. Siliqela leehektare zabathumeli kumazwe angaphandle abazimiseleyo ukulondoloza igama lethu, ukusebenza nemimandla yasemaphandleni kuhambelana ncam nemithetho yethu yoshishino. ”
Ukuba ungathanda iinkcukacha ezithe kratya malunga ne-AGR Garlic Farm kunye noluhlu lweemveliso nceda undwendwele iwebhusayithi: www.kwintox.deinkunkuma.com. Iimveliso zeGallic Farm zifumaneka kuphela kwisitokhwe esilungele ukuthengiswa kwaye zithunyelwe kwiminyango yakho kunye neqela lethu lokuthengisa ngoku.
Kwintliziyo ye-AGR Garlic kukuzibophelela kwindlela yokuphila yendalo. I-AGR Garlic Farm iqulethe iziqu zayo kwaye iyinyani 'yentsimi kwipleyiti' esebenza ngomgangatho ophezulu wokuzinza. Isebenzisa ezona ndlela zokulima zizinzileyo i-AGR iyazingca kukungcamla okuphezulu kweemveliso zama-apile asuka kwiindawo ezisemaphandleni zaseAsia. Ishishini lokulima eliphilayo lifikelela kwiifama ezimbini kwaye sele likhule laya kufikelela kumawaka eehektare. Ijinikhi ye-organic, ii-apile, amatswele, kunye negalikhi xa ixesha lonyaka, zikhuliswa ezifama. Ifama i-AGR igcina ezona mveliso zahlukeneyo zasemaphandleni kubathengisi bendawo ukuya kwamanye amazwe.
Uluhlu olubanzi lweemveliso zeAGR Garlic Farm ezibonisiweyo ngoku ziyafumaneka www.khuphela.com.